Impact Crusher, Shanghai XSM dia fitaovana matihanina amin'ny varotra matihanina, Impact Crusher, fitaovana fiarovana ara-tsakafo, orinasa mpamokatra varotra fanafody. Ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, ny voalohany bande conveyor, vibrating feeder, fitaovana fandefasana entona handefa ny jaw crusher, impact crusher, hydraulic crusher dia harona matevina matevina, ary faharoa amin'ny a jawcrusher kely, hammer crusher Fitrandrahana harena ankibon'ny tany faharoa tadin efijery Ny fihaonana amin'ny mari-pamantarana maromaro amin'ny ore dia entina mankany amin'ny baolina baolina, ultrafine mill ert magnetic separators, flotationmineral machine dia mifidy karazam-pahalalana maro samihafa. Mazava ho azy, fa fanodinana fitrandrahana harena ankibon'ny tany fotsiny ity, Shanghai XSM mifototra amin'ny karazan-kira misy anao fitaovam-pako izay mifanandrify tsara anao, raha manana fanontaniana ianao, dia miangavy anay hifandray aminay na tsindrio ny tsara eo amin'ny sehatry ny famolavolana, ny mpiasa ara-teknika dia manome anao valiny amin'ny antsipiriany.
Ny entana Xuanshi dia mipetaka amin'ny fitaovana maoderina avo lenta. Ity crème ity dia avy amin'ny sehatra maromaro, tsindrona afokasoka, boaty fanangonana hazo, rotor, ary sakafo sakafo sns. Mora, azo itokisana ary ny angovo azo avy amin'ny angovo, ny vokatra maoderintsika dia iray amin'ireo mpitrandraka vato matetika ampiasaina. Ny milina fiarovana Xuanshi dia tena mifanentana amin'ny famokarana fitaovana miaraka amin'ny haben'ny vary maherin'ny 300mm sy ny herin'ny famoahana tsy mihoatra ny 350 MPa. Mety hanimba ny fitaovam-piadiana rehetra izy io, ary fitaovana tena tsara ho an'ny fanodinana faharoa. Ny fitaovana maimai-poana miaraka amin'ny kibika dia be dia be.
Ny vokatra sy ny vokatra
Fandefasana entana 1.Large, efitra famokarana lalina, fihenam-bidy avo (20: 1).
2.Non fifandraisana fototra, rafitra marefo, fahombiazan'ny fahombiazana, asa mora, fikolokoloana tsotra.
3.High-chrome flat hammer, mitafy fanoherana, hery goavana lehibe, fiainana lava.
4. Ny elanelana misy eo amin'ny takelaka fiadiana sy ny tranom-bilia dia mora ny manitsy, noho izany dia voafetra tsara ny habetsaky fitiliana.
Technique Specifications de Impact Crusher
(MG) Max. Faharetan'ny famahana
(T / h) Motor fahefana
(KW) Weight (T) Fitambarana manontolo
Fanamarihana: Io famaritana io dia famaritana fotsiny, ny fanovana rehetra dia mety amin'ny vokatra avy amin'ny vokatra vokatra.
Ny vokatra fanodinkodinam-piasa dia misy fiantraikany amin'ny famoahana fitaovana Mandritra ny fandidiana, ny rotorosin'ny motera dia mitodika amin'ny haingon-drivotra avo lenta, ary ny hamam-pofona napetraka ao anatin'ny rotary dia mifamahofaho amin'ny fitaovana niditra, ary avy eo dia natsipy ilay fitaovana teo amin'ny takela-pandrefesana mba hametrahana indray ny famafazana indray. Miaraka amin'ny famerenana imbetsaka ny plastika tsirairay, ny fanorotoroana dia atao foana ao amin'ny efitrano fiantraikany, ary ny entana dia entina entina rehefa tratrarina ny habe ilana azy. Ny habe sy ny endrik'ilay entana entina amidy dia azo alaina amin'ny fanitsiana ny elanelana eo amin'ny fitaovana sy ny rotoro.
PE Jaw Crusher ho an'ny varotra →